people Nepal » मतपरिणामपछि यस्तो छ दलहरूको आत्मसमीक्षा : कहाँ के कमजोरी भयो ? मतपरिणामपछि यस्तो छ दलहरूको आत्मसमीक्षा : कहाँ के कमजोरी भयो ? – people Nepal
जेठ ५, काठमाडौं – आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
सोचेजस्तो नतिजा आएन दोस्रो चरणमा सुधार स् कांग्रेस
‘हामीले सोचेजस्तो नतिजा आएन । यद्यपि, पूरै नतिजा आउन बाँकी छ । २० वर्षपछि निर्वाचन ग¥यौँ, यो नै सफलता हो । अब पहिलेका त्रुटिहरूलाई करेक्सन गरेर जाऔँ । ‘( शेरबहादुर देउवा, सभापति
(पौडेल पक्ष भन्छ– भोट घट्नुमा देउवाको कमजोरी
(उदारवादी हुँदा विवेकशील र साझाले भोट काटे
‘जति राम्रो हुनुपर्ने सोचेका थियौँ, त्यति राम्रो भएको छैन भन्ने परिणामले देखाइरहेको छ,’ बिहीबार पदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकपछि महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले भने, ‘कांग्रेस र एमाले दुवैको मिश्रित परिणाम आइरहेको छ । अब अहिले देखिएका गल्तीलाई सच्चाउँदै दोस्रोमा हामी प्रभावकारी बनेर जाउँ भन्ने भएको छ ।’
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको बैठकमा पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाम र प्रदेश नं। १, २, ५ र ७ मा ३१ जेठमा हुने निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, डा। रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहानुर कार्की, महेश आचार्यसहितका नेता सहभागी थिए ।
कहाँ के कमजोरी भयो रु
‘सहरी क्षेत्र कांग्रेसको पुरानैदेखिको प्रभाव क्षेत्र हो । तर, अहिले जसरी भोटको ट्रेन्ड देखिएको छ, यस्तो हुने सोचेका थिएनौँ,’ बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य डा। रामशरण महतले । पूरै नतिजा आएपछि फेरि समीक्षा बैठक गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।
केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने र २१ जेठसम्ममा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे । पदाधिकारी बैठकपछि महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले अब प्रधामन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ट्याएका थिए ।
अपेक्षाभन्दा केही सिट कम, तर सन्तोषजनक स् एमाले
अपेक्षाअनुसार परिणाम आएन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जित्ने अनुमान थियो । दोस्रो चरणमा लक्ष्य पूरा गर्छौँ, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमै हुनेछ स् वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष
(दोस्रो निर्वाचनसम्म ५० प्रतिशत कटाउने लक्ष्य
शुरोजंग पाण्डेरनयाँ पत्रिका
दोस्रो निर्वाचनपछि लक्ष्य पूरा गर्छौं स् वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष, एमाले
सिट संख्याभन्दा एजेन्डाको जित स् माओवादी केन्द्र
िटोपबहादुर रायमाझी, नेता
ल पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसार नै नतिजा आयो
ल सहरमा मत नआउँदा नेताहरू आश्चर्यचकित १
ल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा थप मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्ने
नयाँ शक्ति पार्टीले निर्वाचन परिणामले लड्दै दौडिन सिकाएको जनाएको छ । ‘नवजात शिशु नयाँ शक्तिलाई लड्दै–पड्दै दौडन सिक्न र वैकल्पिक राजनीतिको लामो यात्रा तय गर्न जनताले दिएको आदेशलाई हामी विनम्रतासाथ स्विकार्छौँ,’ नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै भनेका छन् । प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले पार्टी गठनको छोटो समयमै चुनावमा होमिए पनि प्राप्त परिणामबाट सन्तुष्ट रहेको बताए ।